rsync: maitiro ekugadzira yekuwedzera yekuwedzera backup | Linux Vakapindwa muropa
Idaidze chero chaunoda, negadziriro yeparutivi, negadziriro yeparutivi, negadziriro yeparutivi, asi zviite. Backups akakosha kudzivirira dhata kurasikirwa uye anowanzo kanganikwa. Izvi zvinodhura makambani mazhinji matambudziko mazhinji nemari, asi zvakare vashandisi vekumba vanoona zvinyorwa zvavo kana basa zvinonyangarika nehusiku. Pamwe nekuda kwekutadza mu hard drive, nekuda kwesoftware dambudziko rinosiya iyo data yakashatiswa, nekuda kwehlengwareware, nezvimwe. Uye pano unogona kudzidza kuzviita ne rsync.
Rangarira kuti kudzivirira kurasikirwa kwedata, kana iwe ukatakura a mutemo wakanaka backup iwe unogona kuchengetedza yako data kana mazhinji acho. Rangarira kugadzira makopi anowanzoitika (akakodzera kuwanda kwedhata nyowani yaunogadzira uye kukosha kwayo) uye kuzviita pane midhiya yakachengeteka. Ndokunge, usazvichengete pane midhiya inoparara senge optical discs dzinogona kukwenya ...
Kune akati wandei mhando dzekuchengetedza, uye iyo inondinakidza pano ndiyo yekuwedzera kopi ichaitwa pasina kuisa chero chinhu, chete ne rsync chishandiso iyo yauchatowana mu distro yako.
1 Mhando dzema backups
2 Maitiro ekugadzira makopi ne rsync
Mhando dzema backups
Kana iwe usati uchiziva chii chinowedzera kuchengetedza, uye misiyano nemamwe marudzi, zvinonamatira kune izvi:
Pedzisa: mafaera ese angave ari mumotokari kana dhairekitori anoteedzerwa.
Inonakidza- Tinongoteedzera mafaera akashandurwa mushure mekumberi kuzere kana musiyano backup. Kuti uite izvi, inofanidza mazuva ekushandurwa kwemafaira ekutanga uye neaya emakopi apfuura uye kana paine misiyano, software ichaita sarudzo yekuteedzera chete izvo zvakagadziridzwa. Chinhu chakanaka pamusoro pekopi iyi ndechekuti haina kurema seyakazara uye inobvumidza iwe kugadzirisa izvo chete zvaunofarira.
Kusiyanisa: ndechimwe chinhu chiri pakati pekuzara uye kuwedzera. Ndokunge, ichateedzera ese mafaera akagadzirwa nyowani neaya akagadziridzwa.
Maitiro ekugadzira makopi ne rsync
Kunyangwe zita racho richingotaura zvinowedzera, ini ndichasanganisirawo mamwe, nekuti ini handifarire chero basa uye zvichave zvakanaka kwauri kuti urangarire mirairo nezvazvo.
Kune imwe yakazara yakazara:
Kune imwe kuwedzera backup:
Para kusiyanisa, kana iwe uchitoda kuzviita kubva pane script kuti uzvirongedze zuva nezuva, vhiki nevhiki kana pamwedzi, unogona kushandisa kodhi iyi:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » rsync: maitiro ekugadzira yekuwedzera yekuwedzera
Dambudziko nemakopi anowedzera ne rsync ndiwo mafaira akadzimwa. Nekopi yekutanga uye nekuisa zvinowedzera, hautore kopi inova chiratidzo chepakutanga.
Jorge Roman akadaro
Chokwadi, asi zvinogona kuve nyore kana iro faira rakadzimwa rakabviswa nekukanganisa. Iyo kopi haifanire kutakura iko kukanganisa kwekukanganisa. Kwaziso
Pindura Jorge Román
Google inosanganisa maturusi ayo ese ekubatana muG Suite kusimudzira ruzivo